औद्योगिक पार्क - नयाँ उत्पादन समायोजित गर्न एक क्षेत्र। सिर्जना, व्यवस्थापन र सेवा
को पूर्वाधार र ऊर्जा, विशेष संगठित औद्योगिक पार्क प्रदान गर्न छ जो इलाका, नयाँ उत्पादन समायोजित गर्न। यो शिक्षा सबै योजना को आवश्यक प्रशासनिक र कानुनी अवस्था प्रदान गरिनु पर्दछ। यो एक वा बढी विशेष कम्पनीहरु नियन्त्रित छ।
औद्योगिक पार्क - विभिन्न वा एउटै उद्योग स्वतन्त्र व्यवसाय हो जो एक विशिष्ट औद्योगिक साइटहरु। सबै व्यवसायीहरूको लागि क्षेत्र समग्र किनभने उत्पादन, जोडी मूल्य सह-सिर्जना र व्यवस्थापन कम्पनी एक को सेवाहरू प्रयोग भएकोले यसको पूर्वाधार, अक्सर लिङ्क साझेदारी - निजी वा सार्वजनिक। उद्यम धेरै नजिक संचार उद्योग गरेको तथाकथित रासायनिक - दबाइ औद्योगिक पार्क छ।
गैर-व्यावसायिक साझेदारी द्वारा सहित एक रिपोर्ट, उत्पादित जुन औद्योगिक पार्क को संघ, त्यहाँ छ। औद्योगिक वा औद्योगिक पार्क - यो पनि जो सबै भूमि को पहिलो अर्थ, गुण को एक नम्बर को एक विशेष सुविधा को एक अपरेटर नियन्त्रित छ, त्यसपछि औद्योगिक, प्रशासनिक, गोदाम र अन्य भवनहरु र परिसर। उत्कृष्ट परिवहन र ईन्जिनियरिङ् पूर्वाधार सम्पूर्ण क्षेत्र मा।
यो औद्योगिक क्षेत्र को आवश्यक विशेषताहरु को अनुमति प्रयोग एक विशिष्ट प्रकार, अर्थात् उद्योग सबै पृथ्वी माथि हुनुपर्छ। को राजधानी निर्माण मुख्य विशेष सुविधा सम्पन्न गर्नुपर्छ। इन्जिनियरिङ पूर्वाधार उपलब्ध हुनुपर्छ। यसलाई व्यवस्थापन कम्पनी उपलब्ध हुनुपर्छ।
विशेष ध्यान कानुनी अवस्था भुक्तान छ। आगो आदर र पर्यावरण सुरक्षा संग सम्झौताका दर्ता मा निर्माण को अनुमति प्रयोग, हेर्न देशमा श्रेणी मा: उल्लेख माथि, यो कानुनी रूपमा लगभग सबै औद्योगिक पार्क को अस्तित्व को आइटम मा सहमत हुनुपर्छ। कानून र नियमहरु द्वारा स्थापित सबै आवश्यकताहरु कडाई, पालन गर्नुपर्छ व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ औद्योगिक परिसर को भाडा सहित।
औद्योगिक पार्क को सफलता को लागि धेरै घटक आवश्यक: यो श्रम स्रोतहरू र भौगोलिक नजिक बजार, मुख्यतया को प्रशस्त छ - (यहाँ सबै उपलब्ध प्रकार को सबै भन्दा राम्रो एकीकरण - हावा र पानी बस र रेल परिवहन देखि) पहुँच। इन्जिनियरिङ पूर्वाधार राम्रो-विकास गर्न छ, र ऊर्जा स्रोतहरू - पनि निरर्थक।
निवास परमिट र प्रशासनिक प्रक्रिया आफ्नो खण्डमा आदेश गर्न सक्षम हुन सरलीकृत गर्नुपर्छ। राम्रो तरिकाले-सुसज्जित औद्योगिक पार्क को उत्पादन को लागि परिसर अत्यन्तै फिट छ र modernly सुसज्जित छन्। कर्मचारीहरु र लागि आवास सामाजिक पूर्वाधार टाढा छैन स्थित गर्न सकिन्छ। औद्योगिक क्षेत्र साधारण विविधता वा विस्तार गर्न संभावना छ। औद्योगिक पार्क को सफल अपरेसन सबैभन्दा उन्नत ईन्जिनियरिङ् समाधान उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
औद्योगिक पार्क को पहिलो सिर्जना 1896 मा बेलायतमा स्थान लियो। प्रमुख वित्तीय अर्नेस्ट Houli तट म्यान्चेस्टर पोत नहर को दस एकड किनेको र त्यसपछि यो भूमि को निपटान कसरी, सोच्न थाले। फेरि - - छैन आफ्नै लागि उहाँले चाँडै एक ठाउँ उत्पादन लागि निर्मित, तर। एक औद्योगिक पार्क सिर्जना गर्न विचार बिस्तारै गठन भएको थियो। पहिलो, परिवहन र ईन्जिनियरिङ् पूर्वाधार सिर्जना भएको छ।
त्यसपछि वित्तीय उहाँलाई स्वामित्वको साइटहरु को औद्योगिक उद्यम पट्टा निर्णय गरेको छ। मामला रोलिङ बल सारियो, र पछि Hawley को भागहरु बेच्न थाले। यसरी विश्व औद्योगिक Trafford पार्क मा पहिलो जन्म भएको थियो। 1910 मा, यो यहाँ थियो Genri फोर्ड आफ्नो अमेरिकी सपना ल्याए - पहिलो युरोपेली कार बोट, र सय तीन भन्दा बढी कम्पनीहरु उहाँको उदाहरण लिएको र म्यान्चेस्टर दस वर्ष अमेरिका देखि आफ्नो कार्यालय र उत्पादन सरेको छ। त्यसैले औद्योगिक मुलुकमा मान्छे enterprising द्वारा शोषण थिए।
यसको मालिकहरूको लागि एक औद्योगिक पार्क सिर्जना के हो? यो सुविधा व्यवस्थापन - भाग कम्पनीहरु विभिन्न तरिकामा प्रतियोगिता विजेता, लाभ मुख्य गतिविधिहरु को एकाग्रता कारण गर्न सक्छन् एक विशेष आउटसोर्सिंग को, फारममा वस्तुहरूको व्यवस्थापन। यहाँ synergies र र काम , मात्रा को अर्थव्यवस्था राजधानी-गहन पूर्वाधार, उद्यम compactly स्थित रूपमा, अत्यावश्यक सेवा मा खर्च कम हुँदा।
विकासकर्ता वा व्यवस्थापन कम्पनी, सुविधा व्यवस्थापन, अर्थात् आगो सुरक्षा प्रदान औद्योगिक पार्क आफ्नै हुन सक्छ मा पनि। स्थान र यसको आकर्षण वृद्धि, उत्पादन आफ्नै लागत कम भन्दा औद्योगिक पार्क को स्थान सहित सबै सकारात्मक कारक, प्रयोग। त्यहाँ पार्क मा भाडामा औद्योगिक ठाउँ एकदम कम छ नयाँ उत्पादन खोलेर व्यापार विस्तार गर्ने मौका छ।
को बीसौँ शताब्दीको sixties को सुरुदेखि, औद्योगिक पार्क को अवधारणा थप र थप सक्रिय प्रयोग गर्न थाले। रूस मा, तिनीहरूले मात्र मोटर वाहन उद्योग र रासायनिक उद्योग विकास संग सम्बन्धित थियो जो पोस्ट-perestroika अवधि, मा देखा पर्न थाले। प्रायजसो, रूस मा खुला औद्योगिक पार्क पश्चिमी कम्पनीहरु।
दुर्भाग्यवश, अनुपयुक्त क्षेत्रहरु, शाब्दिक खुले क्षेत्र मा, लगभग तयार बनाएको उत्पादन साइटहरू, जो को देश मा घरेलू उद्योग को समापन एक विशाल सेट प्रयोग बिना। साथै, कानून द्वारा रूस मा एक औद्योगिक पार्क को स्थिति संलग्न छ, तर पहिले नै संघ स्थापना, र एक मृत बिन्दु सारे छ सामना गर्न। मुख्य कुरा - स्वच्छता र पर्यावरण सुरक्षा पालन गर्न, प्रासंगिक सेवाहरू जडान गर्न, खतरनाक पदार्थ को प्रयोग नियन्त्रण र नियम द्वारा लगे पानी प्रयोग अन्तर्गत हुनेछ।
विश्व अभ्यास तीन आधारभूत मोडेल मा अवस्थित औद्योगिक पार्क विभाजन गरेको छ।
1 पार्क, व्यवसाय, बाहेक ठाउँ गर्न निर्माण, सेवा को एक नम्बर र सम्पूर्ण पूर्वाधार प्रदान पनि पूर्वाधार व्यवस्थापन कम्पनी समावेश जो। अक्सर, यस्तो व्यवस्थापन कम्पनी एक औद्योगिक पार्क को मालिक हो, तर यो आवश्यक छैन। यसको सेवाहरू - निःशुल्क बजार को भाग, को यदि फ्रेमवर्क सम्झौता एक अनिवार्य आधारमा प्रदान सेवाहरूको खपत लागि प्रदान गर्दैन।
2. अलग औद्योगिक पार्क, सेवाहरू लागि अक्सर साना, आकर्षित कम्पनीहरु वा पूर्वाधार कम्पनीहरु को व्यवस्थापन entrusts आफ्नो उत्पादन को आफ्नो क्षेत्र मा राख्न।
सबै कार्यहरु र पूर्वाधार व्यवस्थापन कार्य जो एङ्कर निवेशक (प्रमुख प्रयोगकर्ता), संग 3. औद्योगिक पार्क।
विद्युत आपूर्ति र फोहोर
ऊर्जा यहाँ देखेको छ एक बिजुली, तर पनि अन्य सबै आवश्यक सामाग्री, पाइपलाइन र केबल नेटवर्क द्वारा वितरित जुन रूपमा मात्र: ग्याँस (हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, संकुचित हावा, आदि), पानी (विशेष, केही उद्योग, ठंडा लागि आवश्यक छ, desalted, प्राविधिक, पिउने र यति मा), refrigerants (अमोनिया, freon) र जस्तै। हामी यसको उत्पादन को औद्योगिक पार्क बाफ ताप को आवश्यकता सीमित छैन जस्तै, स्टीम विशेष भूमिका उत्पादन, धेरै उत्पादन छन्, सञ्चालन, chp को दक्षता वृद्धि।
फोहोर निपटान - पनि कम्पनी कुनै पनि व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू को एक, यो योग्य हुनुपर्छ, मात्र होइन औद्योगिक र घरेलू बर्बाद, तर अक्सर विषाक्त जो एक विशेष ओवन आवश्यक निपटान लागि फोहोर छ औद्योगिक पार्क मा रूपमा छ। पनि औद्योगिक हाइड्रोलिक लागि आफ्नै उपचार बिरुवाहरु आवश्यक छ।
विशेषज्ञहरु के छ बारे सहमति गर्न आएका छन् को को प्रतिस्पर्धी लाभ औद्योगिक पार्क। यो, पाठ्यक्रम, पूर्वाधार को प्रावधान सबै उद्योग, यो हो र यस परियोजना को सफलता र सबै उत्पादन मिति निर्भर किनभने राख्नुभयो। धेरै उद्योग लागि स्पेस निर्माण लगानीकर्ताले आकर्षित गर्न धेरै सजिलो छ यो खालको औद्योगिक पार्क सहयोग गर्न पूर्वाधार लागत बचत, मद्दत गर्छ।
विकासकर्ता प्राय पूर्वाधार को संगठन सम्बन्धी विवादहरू को जटिलता हल्कासित नलिनुहोस्, र छन् दीर्घकालीन निर्माण र खाली पार्क उद्योग को दक्षता मा काम गर्न सक्दैन। औद्योगिक पार्क हुनुपर्छ लगानी आकर्षण। जस्तै यो केवल राम्ररी निर्मित पूर्वाधार बनाउन सक्छ। पारंपरिक औद्योगिक साइटहरु आवश्यक सेवाहरूको अभाव छ र प्रस्ताव औद्योगिक पार्क फरक।
औद्योगिक कम्पनी, औद्योगिक पार्क मा स्थित छ, आफ्नै सुरक्षा वा फोहोर निपटान र रसद मा संलग्न कुनै आवश्यकता छ। पार्क मालिक वा व्यवस्थापन कम्पनी को यो लिएको हेरविचार सबै। कम्पनी फरक वा उही उद्योग देखि सञ्चालन गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, तिनीहरूलाई बीच लिंक सामान्य immutable निर्माण को खर्च मा निर्माण गरिन्छ। उदाहरणका लागि, कम्पनी कच्चा माल प्राप्त र एक सामाग्री, माला अप अन्य रुचि उत्पादन, र यो बाहिर अर्द्ध-समाप्त उत्पादन उत्पादन, र त्यसपछि कम्पनी को तेस्रो अर्द्ध-समाप्त उत्पादन उत्पादन गर्छ।
आन्दोलन कम्तिमा कारण धेरै आकर्षक मूल्य यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। एउटै क्षेत्रमा स्थित कम्पनीहरु, छैन त धेरै पार्क को पूर्वाधार को सेवा मा, लागत सबै विभाजित र प्रत्येक यसको आफ्नै पूर्वाधार आयोजना यदि भन्दा टाढा कम प्राप्त छन् रूपमा खर्च भइरहेको। दक्षता बढ्छ, सबै प्रयासहरु रूपमा मात्र उत्पादन मा केन्द्रित छन्। वैचारिक औद्योगिक पार्क को गतिविधिहरु को अभिमुखीकरण, बासिन्दा एक विशेष सेवा प्रयोग गर्नुहोस्। पूर्वाधार व्यवस्थापन सेवाहरूबाट सेवाहरूको स्तर स्थिति व्यापार गरिरहेको लागि अनुकूल छ, लगातार उच्च छ।
रूस हाल समर्थन र औद्योगिक पार्क को विकास को लागि एक ठूलो आवश्यकता छ। राज्य सब्सिडी र कर आउँछ, विशेष ऋण कार्यक्रम प्रदान गरेर यो हेरचाह गर्न थाल्छ। एकदम सफलतापूर्वक कालुगा ( "Grabtsevo"), जहाँ बोट "वोक्सवैगन" स्थित छ मा यस्तो पार्क सञ्चालन। त्यहाँ पार्क को एक साधारण क्षेत्र हो - सात भन्दा बढी सय तीस एकड, र बारेमा मात्र सत्तरी अझै मुक्त छन्।
तपाईं पनि उदाहरण उद्धृत गर्न सक्छन् औद्योगिक पार्क "Vorsino", जस्तै बोट को उत्पादन को लागि ठाउँ नेस्ले, NLMK, सैमसंग र अरूलाई रूपमा प्राप्त कहाँ। त्यहाँ राम्रो-विकास गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र मा पार्क - को बाल्टिक औद्योगिक पार्क (कलिनिन्ग्राद), त्यहाँ चाँडै काम पनि आफ्नै पोर्ट जटिल सुरु हुनेछ। यस्तो उपलब्धिहरू एक अनिवार्य र सबैभन्दा गम्भीर स्थिति समर्थन त्यहाँ छ भन्ने तथ्यलाई, विशेषज्ञहरु द्वारा बताए छन्। केवल क्षेत्रीय स्तरमा समर्थित स्थानीय परियोजनाहरु, टाढा त छिटो र यस्तो ठूलो मात्रा विकास।
Coinage: इतिहास र प्रक्रिया को विशेषताहरु
इलेक्ट्रनिक्स लागि धातु र क्षेत्रीय बोर्डहरू प्रकृया - समन्वय ड्रिलिंग मिसिन सीएनसी
पनडुब्बी "LADA", परियोजना 677
रकेट "yars": प्राविधिक विनिर्देशों र फोटो। InterContinental बैलिस्टिक मिसाइल
कार्यशाला चिसो: वर्णन, विशेषताहरु। काम दोकान चिसो को संगठन
एक बिजुली सबस्टेशन के हो? विद्युत substations र वितरण प्रणाली
Outlast: खण्डमा। Outlast (खेल): नक्सा, Cheats
गुमाउन वजन हितोपदेश मद्दत गर्छ
Nizhniy नोभगोरोड। को Nativity को चर्च: ठेगाना, विवरण र फोटो
Guohua - चिनियाँ चित्रकला पानी रंग र मसी। चिनियाँ कलाकारहरूको। चित्रकला को शिक्षा
साइड पश्चिम पार्क होटल4* (टर्की / पक्ष): तस्बिर, मूल्यहरू वर्णन र समीक्षा
अस्पताल प्राप्त गर्न कसरी, वा रोग feign प्रयास
हतारमा Shortbread कुकीहरू - सबै समय को मिठास र स्वाद
तरिका समाधान - फाइलहरू Xinput13dll संग त्रुटि।
प्रणालीको तत्व के हो? प्रणाली तत्वहरूको उदाहरणहरू। आर्थिक प्रणाली को तत्व
कसरी multivarka मा रोल को लागि चामल पकाउन गर्न
Sprouting गहुँ - एक निश्चित तरिका एक मूल्यवान खाना प्राप्त गर्न
नेत्र विज्ञान रोग को इतिहास। आँखा रोग